Kedu otu esi achọta oke isiokwu ọchụchọ maka Amazon nyochaa njirimara?
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaahịa nwere ike ịzụ na Amazon, ị ga-enwekwa atụmatụ dị mma maka esi ere ya. Ịkwesiri ime ka ndị ahịa gị nwee ike ịzụta ihe ị na-ere n'emeghị ka ndị na-ere ahịa n'ahịa gị. Na ala nke mgbasa ozi kachasị mma gị, ịkwesịrị ịmepụta nyocha ọchụchọ zuru ezu. Iji mee ya n'ụzọ ziri ezi, ị nwere ike ma ọ bụrụ na ị ga-akwụ ọkachamara n'ahịa njirimara Amazon ma ọ bụ jiri ọkachamara nchọpụta pụrụ iche. Ọ dị mkpa ịchọta ihe niile echere maka ọchụchọ ozugbo, ka ị ghara ịlaghachi na isiokwu a n'ọdịnihu. Ichefu mkpuru okwu di oke mkpa nwere ike ibute ego, ohere ohuru ewee laa n'iyi. Keywords ndị nwere nnukwu ọchụchọ dị na Amazon ga-enyere gị aka iguzo ọtọ karịa ndị asọmpi gị ma mee ka ahịa dị mma.
N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere usoro aghụghọ dị iche iche iji mee nchọpụta nchịkọta zuru oke ma melite nhazi ndepụta gị na Amazon. Ọzọkwa, anyị ga-atụle ihe kacha mma isiokwu nchọpụta ngwaọrụ ga-abụ ihe enyemaka ọzọ na usoro nke gị Amazon ndepụta njikarịcha.
Nchọpụta ọchụchọ Amazon
Nnyocha nchọpụta bụ akụkụ dị mkpa nke njirimara nchịkọta ngwaahịa Amazon gị.Ọ gụnyere ịchọ ọchụchọ niile dị mkpa ma zube maka ngwaahịa a. Okwu ọchụchọ dị elu bụ okwu ndị ahụ onye ahịa gị nwere ike iji chọpụta ngwaahịa gị na peeji nke ọchụchọ ọchụchọ Amazon.
Ọkachamara nyocha nke ndị ọkachamara kwesịrị ịgụnye ihe omume ndị dị ka niche analysis nke ahịa, ịchọta ahịa na ịsọ nyocha. Ọzọkwa, ọ dị gị mkpa iji nyochaa àgwà omume shopper iji ghọta ihe ha na-achọ n'ọtụtụ ọnọdụ.
Dị ka a na-achị, ọ fọrọ nke nta ka ọ gaghị ekwe omume ịnakọta ozi a niile na aka. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'Ịntanet ji eji kọmputa eme ihe.
M nwere ike iji ngwaọrụ ndị na-esonụ dịka ha nwere ike inye gị ihe kachasị mma:
Ihe kachasị eji eme ihe maka nyocha isiokwu bụ Google Planner. Ị nwere ike iji data nyere ngwaọrụ a dị ka onye nnọchiteanya maka ihe njirimara nke Amazon gị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị mara na usoro nhazi Amazon dị iche na Google otu. Ọ bụ ya mere aro nke isiokwu, ị ga-enweta iji ngwá ọrụ a, agaghị abụ kpọmkwem. Ịkwesịrị itinye ụfọdụ ntanetị Amazon iji nweta foto nke ụdị na ọnụ ọgụgụ ọchụchọ ndị a na-eme maka ngwaahịa na Amazon.
Ọ bụ nọmba otu isiokwu Kwadoro Ngwaọrụ na weebụ. Ọ na-enye data na-enweghị atụ maka Amazon, Google, YouTube, na Bing. Ọ dị nnọọ mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nyocha dị iche iche nke ndị ahịa gị nwere ike ịchọta usoro usoro ọchụchọ dị iche iche.
Ngwá ọrụ a nwere ike ịchọta okwu ọchụchọ ogologo oge site na ịkọ isiokwu ị banyere n'ime usoro ya. Mgbe ịhọrọ ihe niile a tụrụ aro ma pịa bọtịnụ aro, ngwá ọrụ ahụ na-agbagha aro niile nke isiokwu site na igbe nyocha Amazon.Nchọpụta a ga-enye amaokwu kachasị akọwapụta.
Ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na Amazon ma chọọ ịhọrọ nke niche ahịa kasị mma maka azụmahịa gị, Amazon Niche Nyocha bụ ihe dị gị mkpa. Ọ na-enyere aka ịchọpụta ngwaahịa ndị ị nwere ike ire na ego ole. Ọzọkwa, iji ngwá ọrụ a, ị nwere ike ịchọpụta ego ole ị ga-enweta na ya.
Tụkwasị na nke a, ngwá ọrụ a ga - enyere gị aka ịgbaso usoro atụmatụ gị na onye ọkwá gị. Ị nwere ike ịchọta usoro atụmatụ ọnụahịa ha, nyochaa isi okwu na ịkọ atụmatụ ego.
Semrush bụ ngwanrọ ọkachamara ọkachamara nke ejiri mee ihe maka ọtụtụ atụmatụ nyochaa gụnyere nchọpụta isiokwu. Ngwá ọrụ a nwere ike ịnye gị isiokwu ọchụchọ kachasị mkpa ma zubere na naanị nkeji ole na ole. Ọzọkwa, ọ na-egosi gị onye asọmpi na Keywords na otú ha si n'usoro site na ha. Ihe niile ị chọrọ bụ idetu aha URL nke onye na-asọ gị egwuregwu, na ngwá ọrụ Semrush ga-enye gị otu mkpụrụokwu ọbụla ha na-akwado.
Olee otú ime nnyocha ntanetị nwere ike isi mụbawanye ahịa gị na Amazon?
Ngwaahịa Amazon gị ga-egosi na nsonaazụ ọchụchọ ma ọ bụrụ na ndepụta gị nwere isiokwu niile onye ahịa tinye n'ime nchọpụta ọchụchọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ dịkarịa ala otu okwu, ngwaahịa gị anaghị enwe ohere ịpụta na nsonaazụ ọchụchọ, ma emesịa, ị ga-echefu ahịa ahụ.
Nzube bụ isi nke nchọpụta isiokwu bụ ịmepụta ndepụta nke okwu ọchụchọ niile dị mkpa maka otu ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwapụta isiokwu dị elu nke ọchụchọ Amazon na nsụgharị ederede gị, nchọpụta isiokwu ga-eme ka eziokwu ahụ bụ na ndị ahịa ndị ọzọ ga-ahụ ngwaahịa gị, pịa ya ma mesịa ghọọ ndị na-akwụ ụgwọ gị.
Olee otú ịchọta ọchụchọ ọchụchọ dị elu maka ngwaahịa Amazon gị?
Mbụ mbụ, M ga-ekwupụta na ị ga-adị n'usoro mgbe ị na-eme nchọpụta isiokwu maka ngwaahịa gị. Ọ ga - enyere gị aka ịkọwa anya ma ghara ịhapụ ozi ọ bụla dị mkpa. Ịmekọrịta isiokwu dị iche iche ga-enyere gị aka ịhazi, na nhazi. Mkpụrụokwu ndị a nwere ike ịbụ isi na nke abụọ. Mkpụrụ okwu mbụ bụ ndị na-ekesa ngwaahịa bụ isi. Ọ nwere ike ịchọta okwu ọchụchọ na-akọwa ngwaahịa ma kwuo ihe ndị dị mkpa. Mkpụrụokwu nke abụọ bụ okwu ọchụchọ n'ozuzu nke a pụrụ iji mee ihe mgbe ị na-achọ isiokwu ndị bụ isi. Enwere ike itinye ya na okwu ndị metụtara otu iche iche, ụdị mmadụ, ụdị ojiji, ma ọ bụ àgwà ndị ọzọ.
Ya mere, iji mee nchọnchọ ọchụchọ gị, ịkwesịrị ịkekọrịta okwu ọchụchọ niile n'ime edemede abụọ - isi na nke abụọ. Na oge nke oge, ọ ga-enyere gị aka ịbịakwute mkpokọta ọchụchọ kachasị mkpa nke nwere ike imelite gị Amazon ogo Source .